သုံးသပ်ချက် • Jan 06, 2020
ThinkPad ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခြင်း
တလောက ကျွန်တော့် Macbook Air 2015 လေး တဖြည်းဖြည်း လေးကန်လာပြီး သူ့ရဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် Display ကို အမြင်ကတ်လာတာနဲ့ upgrade ဖို့ စက်တစ်လုံး စဝယ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နောက် ကိုယ့်ရဲ့ အရင် (နှင့်) ယခု CTO တွေ ဝိုင်းမစတာ ThinkPad တွေကို မျက်စိကျလာတယ်။ အဓိက အချက်က အသေ durable ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်လို ပစ်စလတ်ခတ် ပစ္စည်းတွေ ကိုင်တတ်တဲ့ကောင်မျိုးနဲ့ ကိုက်လောက်တယ်ဆိုပြီး စဥ်းစားမိတာကြောင့်ရယ်၊ ဟိုး ကျွန်တော် ၅-၆ နှစ် အရွယ်လောက်က အဖေကိုင်ခဲ့တဲ့ IBM ThinkPad ကို အမှတ်ရတာရယ်။ (model တော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ Spec က မှတ်မှတ်ရရ 800Mhz Intel Processor ပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲ့တုံးက သူ့ Laptop နဲ့ ဂိမ်းလေးတွေဆော့ခဲ့ဖူးတယ်။ ဥပမာ ပေးရရင် BAB ကြော်ငြာထဲက ခန့်စည်သူ ကိုင်တဲ့ IBM အမျိုးအစားပေါ့။) အဲ့ဒါလေး emotional value ရှိတာနဲ့ ThinkPad ပဲ ဝယ်မယ်လို့ ဒုံးဒုံးချ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
တခြား စက်တွေ ကြည့်သေးလားဆိုတော့ ကြည့်ပါတယ်။ Dell XPS series, Apple Macbook Pro တို့လိုပေါ့။ Dell XPS ကျတော့ premium သိပ် မခံစားရတာကြောင့် သိပ်စိတ်မဝင်စားမိဘူး။ Macbook Pro ကျတော့ ကိုယ်တိုင် upgrade လုပ်မရတာရယ် ပြီးတော့ တလွဲဆံပင်ကောင်းထားတဲ့ ပြားကပ်ကပ် Keyboard ကို ခံစားပြီးတဲ့နောက်မှာ ပန်းသီးထပ်မကိုက်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
လက်တလော ThinkPad series ထဲမှာ ဘာကောင်းမလဲဆိုပြီး Reddit မှာ သွားမွှေတော့ (r/thinkpad) X series ရယ် P series ရယ်၊ T series ရယ်ကို recommend ကြတယ်။ X series ထဲက Carbon နဲ့ Extreme ပြီးတော့ P series ထဲက P1 ပေ့ါ။ Carbon ကို အရင် ကြည့်မိတယ်။ သူကတော့ ဆက်ဆီကျတယ်။ အသေပေါ့တယ်။ Macbook တွေထက်တောင် ပေ့ါသေး။ မကြိုက်မိတာက ကိုယ်က code ရေးမယ့်သူဖြစ်တဲ့အတွက် Screen ပိုကြီးတာ လိုချင်မိတယ်။ 1080P + 300 Nits ကလည်း နေရောင်ထဲမှာ မှိန်နေမယ့်ဟာ ဖြစ်လို့ရယ်၊ စာလေးတွေက အစွန်းလေးတွေမှာ pixel ထွက်နေတာ (Macbook Air users, you know what I'm talking about) ကို စိတ်တိုင်းမကျတာရယ်ကြောင့် မရွေးခဲ့ဖြစ်ဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ screen ပိုကြီးပြီး upgradeable ဖြစ်တဲ့ P1 နဲ့ X1 Extreme ကို ယှဥ်ကြည့်မိတယ်။ P1 က Xeon Processor ပါတယ်၊ သို့သော် GPU မကောင်းဘူး။ X1 က
Processor ကို Intel i9 (9th Gen) ထိရတယ်။
4K Display ထည့်လို့ရတယ်။
Up to 64 GB RAM +4TB SSD upgrade option ရှိတယ်။ ကိုယ်တိုင် upgrade လုပ်လို့ရတယ်။ GPU က Nvidia 1650 (mobile) ပါတယ်။
ကိုယ်က light gaming လုပ်မယ်သူဆိုတာ့ X1 ကိုပဲ ရွေးလိုက်တယ်။ (T series ကို အဲ့အချိန်မှာ ဘာလို့ ပယ်လိုက်သလဲဆိုတော့ display မကြိုက်တာနဲ့ ပိုလေးတယ် ခံစားရလို့)။
ဒါနဲ့ ဝယ်တော့မယ်ပေါ့၊ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြဿနာက ဒီကဆိုင်တွေမှာ X1 Extreme မရှိဘူး။ 😤
သောက်ဂွပဲဆိုပြီး Facebook မှာ မွှေနှောက်ကြည့်တော့ X1 ရောင်းတဲ့ဆိုင်တော့တွေ့တယ်။ ဒါမယ့် Gen 1 ကို Gen2ဈေးလောက်တင်ထားပြီး Spec က ကိုယ်လိုချင်သလောက် မဟုတ်ဘူး။ Gen 1 က heat sink တွေမှာ ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုလို့ Gen2ကို လိုက်ရှာမိတယ်။ ရှိကို မရှိဘူး။ နောက်ဆုံး ဒီက Authorized Dealer ဖြစ်တဲ့ KMD page ကို မက်စိပို့ စုံစမ်းကြည့်တော့ သူက email တစ်ခုကို ပို့ပေးပါဆိုလို့ စမ်းကြည့်မိတယ်။ အောက်မှာ ကျွန်တော် သူတို့ဆီက ဘယ်လိုဝယ်ခဲ့လည်းဆိုတာကို ThinkPad Users Myanmar Facebook Group မှာ တင်ခဲ့တာကို Copy + Paste လိုက်ပါတယ်။
ဒါ KMD ကို ကျွန်တော် customized Thinkpad မှာတုံးက email ပါ။ commercial@kmdcomputer.com ကို Custom ThinkPad မှာချင်လို့ဆိုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Spec ကို Lenovo Website မှာ ချိန်ပြီး သူတို့ဆီ SS ရိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆို ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ invoice ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မပို့ခင်မှာ ကိုယ်မလိုတာတွေ အရင်ဖြုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Windows User မဟုတ်တဲ့အတွက် Windows License ရယ် RJ-45 Dongle လည်း ဖြုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Intel vPro ဆိုတာလည်း ဖြုတ်ခိုင်းပါ။ ပိုဈေးသက်သာပါတယ်။ အဲ့ဒါ email ထဲ အပြည့်အစုံ ရေးပြီးသာ ပို့လိုက်ပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဈေးညှိဖို့ဟာကို သူတို့ဘက် email က တစ်ခါတစ်ခါ အတော်ကြာလို့ (ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ)။
Warranty Package တော့ ထည့်ဖြစ်အောင်ထည့်ပါ။ Apple နဲ့ ယှဥ်ရင် ဈေးအတော်သက်သာပြီး တစ်ခါတစ်လေ defect ပါတတ်တယ်လို့ ကြားမိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က KMD က local warranty ပဲ စိတ်ချလို့ တစ်ခါတည်း ထည့်လိုက်တာပါ။
နောက်ဆုံး ဈေးကို အဆင်ပြေပြီဆိုတာနဲ့ confirm email ပို့ပြီး deposit တစ်ဝက်သွားပေးလိုက်ပါ။ ဘယ်မှာ ငွေပေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဖုန်းဆက်မေးလိုက်ပေါ့။ ကျွန်တော့်တုံးက ပထမ တစ်သုတ်ကို ပန်းဆိုးတန်းမှာ ပေးရပြီး နောက်တစ်သုတ်တော့ လမ်း ၅၀ နားက Service Center မှာပေးပြီး ပစ္စည်းသွားယူရပါတယ်။ (Shipping + Tax ပေးစရာမလိုပါ)
ပြီးရင်တော့ စောင့်ပေတော့ပဲ။ ၂ လနီးနီးတော့ စောင့်ရတယ် (ဒါတော့ လုံးဝ မနိပ်) Warranty မျက်နှာကြောင့် သည်းခံအောင့်အီးပြီး စောင့်လိုက်ပါတယ်။ ရောက်လာတော့လည်း စိတ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုပဲ။ တအားဆိုးတာက Warranty seal တွေကို screw တွေပေါ် ပိတ်ကပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော် thermal paste နဲ့ RAM ထပ်တပ်ဖို့ ဝမ်းသာအားရ ဖြုတ်ဖို့ ကြည့်လိုက်တာ အဲ့ဒါမြင်တော့ တော်တော် စိတ်ပျက်သွားတယ်။ KMD Commercial က Manager ကို မေးလိုက်တော့ သူက Free of Charge အကုန်လုပ်ပေးပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်တပ်ချင်တဲ့ ပစ္စည်းသာ ယူခဲ့ပါတဲ့ (Taxi ခတော့ ကုန်မှာပေါ့လေ)။
Heavy Gaming လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးတဲ့သူတွေနဲ့တော့ မကိုက်ပါဘူးလို့။ Dota2ကိုတော့ ရှယ် FPS နဲ့ဆော့လို့ရပြီး တခြား computational heavy games (like Nier: Automata) ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေပါကြောင်း။
အောက်ကပုံမှာ မှာတဲ့ email + specs ကို တွဲပေးထားပါတယ်။
ကဲ ဒါနဲ့ နိုဝင်ဘာလကုန်လောက်မှာ ThinkPad လေး လက်ထဲရောက်လာတယ်ပေါ့။ Reddit မှာ လိုက်ရှာထားသမျှ Ubuntu based distro ဖြစ်တဲ့ Pop!_OS က သူ့နဲ့ ကိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ တင်လိုက်တယ်။ အရင်ကလည်း ကျွန်တော် Pop သုံးဖူးတယ်။ သူ့ဟာလေးနဲ့သူ အဆင်ပြေပါတယ်။ (inb4 "I use Arch btw")
အောက်မှာတော့ အများကြီး သိပ်မပြောတော့ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲက standout ဖြစ်တယ်ထင်တဲ့ အချက်ကလေးတွေပဲ ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
သုံးတော့ ရှယ်ကြိုက်တာကတော့ Keyboard ပဲ။ Key Travel ကောင်းတယ်။ "ဖြောင်းထိုင်း ဖြောင်းထိုင်း" အသံထွက်အောင် ရိုက်မှ ကျေနပ်တဲ့သူတွေ အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တယ်။ Keyboard က Mechanical တွေနဲ့ ယှဥ်လို့တော့ မရပေမယ့် great low profile keyboard ဆိုတာတော့ ငြင်းလို့မရဘူး။ Key တွေက သူ့နေရာလေးနဲ့သူရှိတယ်။ မှားပြီး power သွားပိတ်မိတာမျိုးတွေ မဖြစ်ဘူး။ လုံးဝမကြိုက်တာတော့ Media Control key မရှိဘူး။ Spotify မှာ သီချင်းနားထောင်နေရင်း pause လို့မရဘူး။ Fn Key ဖိပြီး အလုပ်လုပ်ရတယ် (FnLock ခလုပ်တော့ရှိတယ်)။
Keyboard w/ backlit lights
ကျွန်တော်တော့ Display ကို 4K UHD (Matte Display) သုံးထားပါတယ်။ သိတယ်မလား loading လုပ်နေရင် မြင်နေရတဲ့ ကိုယ့်ရုပ်ကြီးကို မတွေ့ချင်လို့။ နေရောင်အောက်မှာ သုံးလို့လည်း အဆင်ပြေတယ်။ Sharp ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်တော့ သတိထားမိတယ်။ အနီရောင်ဘက် saturation ပိုသမ်းတယ်။ Macbook 16 inch နဲ့ ယှဥ်ထားတာကို သိချင်ရင်တော့ အောက်က video ကို ကြည့်ပါ။
MacBook Pro 16 vs X1 Extreme Gen 2
ဒီ Laptop ဝယ်တော့ ဘာကိုပဲ စိတ်ညစ်မိလည်းဆိုရင် Battery ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ Reddit မှာလည်း 4K display က battery သိပ်မခံဘူးလို့ ပြောထားတယ်။ လက်တွေ့ သုံးကြည့်တော့ အမြင့်ဆုံး brightness နဲ့ဆို ၃ နာရီနီးပါးလောက်ပဲ ခံတာကိုတွေ့ရတယ် (ပြီးတော့ ကျွန်တော်က Linux သုံးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် battery က Windows လောက် သိပ် optimize မဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ပေါ်မှာဆို ပိုခံမယ်ထင်တယ်)။ တချို့တွေက CPU under-volt လုပ်ဖို့ ပြောပေမယ့် လက်မရဲသေးလို့ မလုပ်သေးပါဘူး။ Recharge Time ကတော့ မြန်ပါတယ်။ စိတ်ထင် နာရီဝက်လောက်နဲ့တင် အပြည့်ပြန်ရတယ်။
The "Nipple" (TrackPoint)
TrackPoint (a.k.a the Nipple Button)
အဲ့အနီစက်ကလေးက ခိုးလိုးခုလုနဲ့ ရှုပ်နေတယ်မလား? မထင်ပါနဲ့။ အဲ့ဒါ ဟိုးအရင်က IBM တွေမှာ ပါခဲ့တဲ့ legacy ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ အနီရောင်ဖုလေး (TrackPoint) ကို ThinkPad model တိုင်းမှာ ထည့်ပေးထားတာပါ။ ကျွန်တော် စသုံးတော့ အတော်လေးကို တိုင်ပတ်ပါတယ်။ Apple TrackPad က လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ ဟိုဟာကို လွမ်းမိတာတော့အမှန်။ Mouse sensitivity တွေချိန်၊ နေ့တိုင်းလိုလို သုံးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်ထဲမှာ အဲ့ဟာလေးကို သွားပွတ်နေမိတယ်။ Code ရေးရင်း mouse သုံးရမယ့်အချိန်ကျရင် သူ့ကိုလည်း သုံးတယ်။ Scroll လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ (TrackPad အလယ်က ခလုပ်ကို ဖိရင်းအောက်ကို ဆွဲရင် Scroll) ဒါမယ့် interaction တအားများတဲ့အခါ (eg: selecting lines etc) ဆိုရင်တော့ wireless mouse သုံးတယ်။ Learning Curve မြင့်ပေမယ့် သူ့ဟာနဲ့သူ အဆင်ပြေတာပါပဲ။ လက်က mouse မကိုင်ချင်ရင် သူ့ကို သုံးလိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သူများ keyboard သွားကိုင်ရင်တောင်မှာ လက်က ယောင်ပြီး စမ်းတဲ့ထိကို ဖြစ်လာပြီ။ 😝
Ports တွေကတော့ စုံပါတယ်။ ကျွန်တော့်စက်က အပေါက်လေးတွေနဲ့ caption တွဲရေးထားပါတယ်။
Left side (left to right: Power Outlet,2USB Type C ports, HDMI port, RJ-45 Dongle Port, AUX port)
Right side (left to right: Smart Card Reader - not included, SD Card Reader,2USB ports, Kensington® lock slot)
ရုံးက ကိုယ့် CTO က MacBook Pro 16 inch ရလာတာနဲ့ သူနဲ့ နည်းနည်းယှဥ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ThinkPad က ပိုပေါ့တယ်၊ အထူတော့ (နည်းနည်း) ရှိတယ်။ Screen Size မှာတော့ 16:10 ဖြစ်တဲ့ Apple 16 Inch ကို မမှီပါ။ ဈေးကွာခြားချက်ကတော့ ၉သိန်း ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ 15.6" screen ဖြစ်ပေမယ့် လွယ်အိတ်ထဲမှာ လေးလံတာ ထူတာတွေ လုံးဝ မခံစားရဘူး။
အောက်က ပုံလေးတွေမှာ ယှဥ်ရိုက်ပြထားတာတွေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Back Comparison (X1 Extreme has Carbon Fiber Weaving)
Screen Bezel Comparison
ဘယ်လောက် degree ထိချိုးလို့ရသလဲ?
Operation System (Linux)
OS ပိုင်းမှာ Linux တင်သုံးလို့ အဆင်ပြေလားဆိုရင်တော့ ပြေတယ်လို့ပဲ ပြန်ဖြေရမှာပဲ။ ၁ခုတော့ အရမ်း ဒုက္ခရောက်တယ်။ HDMI မသိတဲ့ကိစ္စ။ ကိုယ်က Presentation လုပ်ခါနီးမှာမှ အဲ့ဒါအလုပ်မလုပ်တာမြင်တော့ တော်တော် မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း Reddit မှာမွှေတော့ Lenovo က ဥာဏ်ကောင်းပြီး HDMI အထွက်ကို Nvidia GPU နဲ့ bind ထားတယ်တဲ့ခင်ဗျ။ သူများတွေကတော့ CLI hack တွေနဲ့ လုပ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တော့ Nvidia X Server GUI ထဲမှာ ဟိုဒီလျှောက်ကလိရင်းနဲ့ ရသွားတယ် (ဘာကြောင့်လည်းတော့ မပြောတတ်) ဒါမယ့် stable တော့ မဖြစ်ဘူး။
Pop!_OS ပေါ်မှာ built-in fingerprintတော့မရပါ။ Windows မှာတော့ ရတယ်။ တလောက Arch Wiki မှာ ဖတ်လိုက်ရတာကတေ့ာ Fingerprint ရနေပါပြီတဲ့။ နောက်ပျင်းသွားရင် Arch distro hop ပြီး ကလိကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ 😜
Laptop က လက်ရာအသေထင်ပါတယ်။ စာနည်းနည်းရိုက်ရင်ကို Keyboard ပေါ်မှာ fingerprint တွေ ကပ်ကျန်နေအောင်ကို လက်ရာထင်ပါတယ်။ သူ့ main body လည်း လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင် လက်ရာကပ်ကျန်သွားပါတယ်။ လက်ဆီထွက်တဲ့သူတွေဆို ပိုထင်ပါတယ်။
မင်း ဒီစက်ဝယ်တာ တန်ရဲ့လားလို့ မေးရင် ကျွန်တော်ကတော့ တန်တယ်လို့ ဖြေမှာပါ။ ဒီစက်မှာ ကိုယ်သဘောကျလွန်းတဲ့အရာတွေ ရှိသလို နောက်ပိုင်း စက်အသစ်မဝယ်ပဲ SSD + RAM ကို ကိုယ်ပိုင် အမြဲ upgrade လို့ရတာရယ်၊ ကိုယ်လိုအပ်ချက်တွေ (ports, keyboard, display etc) ကို balanced ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက် တန်တာပါ။
ဒါကို ဝယ်ချင်လို့ သဘောကျတယ်ဆိုရင်၊ မေးချင်တာလေးတွေ ရှိရင် dev.kaungmyatlwin@gmail.com ကို email ပို့ပြီး မေးထားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အားရင် ပြန်ဖြေထားပေးပါမယ်။